လူမှာအရေးကြီးဆုံး နှစ်ခုပဲရှိတယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » လူမှာအရေးကြီးဆုံး နှစ်ခုပဲရှိတယ်။
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Oct 18, 2011 in Cultures | 12 comments
အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးမှု (love of truth) ရယ် ဒါဘဲဖြစ်တယ်။
ကျမနေထိုင်ရာသင်္ဃန်းကျွန်းကနေ …ဒိနေ့ ကိုကိုနဲ့ ကျမရုပ်ရှင်ကြည်ရန့် မြို့ ထဲ ကိုသွားဘို့ ချိန်းဆိုမိကြပါတယ်..
ကိုကိုကတခါတလေ..သွားတာအဌားကားနဲ့ သွားရန်ပြောပေမဲ့ ။အချိန်ကလေည်းစောနေသေးတာကြောင့်38လိုင်းကားပဲ စိးရန်ကိုကိုကိုပြောပြီး စီးခဲ့ ကြပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကျမတို့ မှာနောင်ရေးကလည်းရှိသေးတယ်..အစစအရာရာချွေတာကြရမယ်လေ။
ကိုကိုကတော့..မိ သဘောဆို တဲ့ အကြည့်နဲ့ လာခဲ့ ကြပါတယ်။
ကျမတို့ ကားပေါ်မှာနေရာမရခဲကြပေမယ့်သိပ်အကြပ်ကြီး မဟုတ်တဲ့
သုဝဏလမ်းဆုံအရောက်မှာ..ကျမတို့ နံဘေးကဆင်းသွားကြတာမို့ ကိုကိုနဲ့ ကျမနေရာထိုင်ခုံရခဲ့ ပါတယ်။ကျမကပြူတင်းပေါက်ဘက်ဝင်ထိုင်ပြီး ကိုကိုကလျှောက်လမ်းဘက်ကပါ။
ဘော်လုံးအပွဲ အပြိးဆင်းလာတဲ့ သူတွေနဲ့ မလို့ ကားပေါ်မှာလူတော်တော်များလာခဲ့ ပါတယ်။
ကားပေါ်ကိုလူငယ်တသိုက်..နောက်ပြောင်အော်ဟစ်ဆဲဆိုနေတဲ့ လူငယ်၅ ယောက်လည်းတက်လာပါတယ်။
အော်ဟစ်နောက်ပြောင်ဆဲ ဆိုကြပြီး၊ ကြောင်ကြောင်းကျားဆေးမှင်ကြောင်ထိုးထားတဲ့လူငယ်တသိုက်နဲ့ တကားထဲ အတူစီးရတာမလို့့…ကျမမှာတော့နှာခေါင်းရှုံ့စိတ်ညစ်ရပါပြီ ။
ကိုကိုကတော့….မင်းအပြစ်နဲ့ မင်းဆို တဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်ခဲ့ ပါတယ်..ကိုကိုနဲ့ ကျမကဆဲ ဆိုတာကိုလုံးဝမကြိုက်တတ်သူပါ။အမိယုတ်ညံ့သူသာဆဲ တတ်ကြတာလို့ ကျမကသိထားပါတယ်။
ဒီအချိန်ကိုကိုဘေးမှာ့ကလေးချီထားတဲ့ အမျိုးသမိးတယောက်လည်းတက်လာခဲ့ ပါတယ်။
ကိုကိုကတော့…နေရာကြပ်လို့ ပဲလား…ဒါမှာမဟုတ်မတွေ့တာပဲလား အပြင်ငေးရင်းလိုက်ပါခဲ့ ပါတယ်။ကျမလည်းကိုကို ကိ့ တစ်ထောင်နဲ့ တို့ ပြီး သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ….ကျမတို့ ခုံရှေ့ ကလူကြီး တယောက်ကနေရာထပေးတာတွေ့ ရပါတယ်။
ကြည်နူးစရာ တစ်ခု သွားတွေ့တယ်..ဘာလည်းဆိုတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ Lady First ဆိုပြီးတော့ အမျိုးသမီးတွေကို ဦးစားပေးဖို့ စာသားလေး ရှိပါတယ်……။
ဒီလိုပဲ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ လည်း လိုင်းကား စီးတဲ့အခါ သံဃာတော်များ ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ၊ နာမကျန်း သူများ ကိုနေရာ ဖယ်ပေးကြပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမ တစ်ခါ ၊နှစ်ခါ မက တွေ့ ကြုံ ဖူးတယ်..အဲဒီလူ တွေကပဲ နားမလည်တာလား ၊တစ်ကိုယ် ကောင်းဆန် တာလား ၊လူမှုရေး ခေါင်းပါးကြတာလား ဆိုတာ ကာယကံ ရှင်တွေပဲ သိကြမှာပါ ။ယောင်္ကျား ရင့်မာကြီး တွေဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ မိန်းခလေးနဲ့ အပြိုင် နေရာလုတာတွေ တွေးကြည့်တာနဲ့တင် ရှက်ဖွယ်လိလိ ဖြစ်ပါတယ်။ကူညီပေးတတ် သော လူကြီး၏ စိတ်ဓာတ်မှာ လေးစားစရာ ဖြစ်သည် ရုတ်တရက်စိတ်ထဲ မှာကိုကိုအစားရှက်မိနေပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း..ကိုကိုမမြင်တာဘဲဖြစ်မှာပါလို့ တွေးမိလိုက်ပါတယ်။
ကြက်ဘဲဈေးနားအရောက်မှားကားပေါ်ကိုလူကြီးတစ်ယောက်တက်လာပါတယ်။ လက်ထဲ မှာတော တစ်ထောင်တန် ငွေတစ်ရွက်ကိုင်ထားပြီး စပယ်ယာဝေးသွားရင်ကားခလှမ်းပေးပြီ..အနားရောက်တဲ့ အခါ..ကားခပေးပြီးသလိုနေနေတာမလို့ကျမကောကိုကိုကပါသတိထားမိလိုက်ပါတယ်…။
အဲ့ ဒိလူ က ပုဇွန်တောင်ဈေးအထွက် မှာတော့ စပါယ်ယာကောင်လေးကို….
“ဟေ့ သူငယ်ငွေတစ်ထောင်ပြန်အမ်းလေ..” လို့ တောင်းလိုက်တာကြားမိလိုက်ပါတယ်။ ကျမသေချာသတိထားကြည့်နေတယ်..ဒီလူကားခပေးချင်ဟန်ဆောင်ပြီးအိတ်ထဲ ပြန်ထဲ့ တာကိုသိနေမြင်နေတယ်လေ။
စပါယ်ယာကောင်လေးက …လူအများနြ့ ဆက်ဆံရတာမလို့ ..မမှတ်မိတဲ့ အခြေအနေမှာ…..
တဆက်တည်း..အဲ့ ဒိလူ့ က..” ငါ လှမ်းပေးတာ သူတို့ လည်းမြင်တယ.် “လို့ ကျမတို့ နှစ်ယောက်ကိုပါ ဆွဲထည့်လိုက်ပါတယ်…။
ပြီးတော့.”.မင်းတို့ စပါယ်ယာတွေ ကဒီအတိုင်းဘဲ…”.ဟိန်းဟောက်နေပါတော့တယ်..။
ကိုကိုကဘာမှမပြောဘဲ…ကျမကမနေနိုင်ပါဘူး…စပါယ်ယာကောင်လေးကိုမပေးကြောင်းပြောလိုက်ချင်နေမိပါတော့တယ်..။ဒါနဲ့ စပါယ်ယာလည်း..အများနဲ့ ဆက်ဆံနေရတာမလို့ ငွေကိုးရာပြန်အမ်းမလို့ လုပ်လိုက်တဲ့ အခါ ကျမ မကျေမနပ် ဖြစ်ပြီးပြောမယ်အလုပ်မှာ ကိုကို က
“မိ….ဘာလုပ်တာလည်းဆို တဲ့ အကြည့်မင်းနဲ့ မဆိုင်ဘူးငြိမ်ငြိမ်နေပါ”လို့ ကိုကို ရဲ့ တိးတိုးပြောသံမှာ…..ကျမရှက်လို့ နေရပါပြိ…။
အဲ့ ဒိအချိန်မှာဘဲ..ခုဏဆဲတဲ့ တစ်သိုက်ထဲ ကလူငယ်လေးတွေ က
“”ဒီမှာဦးလေးကြီး…. စပါယ်ယာလေးက ခင်ဗျားသားအရွယ်လောက်ရှိတယ်..သူရိုးရိုးသားသားလုပ်ကိုင်စားသောက်နေတာ…။
ခင်ဗျာအဝေးရောက်မှပေးချင်ဟန်ဆောင်တယ်..အနီးရောက်တော့မပေးဘူး….ဒီမှာကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း၅ယောက်လုံးခင်ဗျာလုပ်နေပုံကိုမြင်တယ်။ ”
.”ဒီဲ့ အစ်မလည်းမြင်တယ်ဗျ””လို့ ရဲရဲဝင့်ဝင့်အမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်ပေးသွားတယ်။
ကျမချစ်ခင်ရတဲ့ ကိုကို..ကဘယ်လိုလူလည်းကွယ်..ပညာတွေတတ်ပါ့ရဲ့ နဲ့ ကျမနှာခေါင်းရွှတ်ကဲ့ ရဲ့ မိခဲ့ တဲ့ …ဆဲ တတ်ကြတဲ့ လူငယ်တသိုက်က..
.ကျမအားကျအလေးထားတဲ့ ရိုင်းပင်းကူညီတတ်တဲ့ စိတ်တွေရှိကြပါရဲ့ ………
ဒိလူငယ်တွေသာမဆဲတတ်ခဲ့ ရင်..တကယ့်အဖိုးတန်လေးတွေပဲဖြစ်မှာပါ..။
လူတစ်ယောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုငွေကြေးနဲ့ မတိုင်းတာဘူး..တန်ဘိုးနဲ့ ပဲတိုင်းတာတတကျမခေါင်းမဖော်ဝံ့အောင်….ရှက်ရပါပြိ။
ဒီစာလေး က ကိုကို..ကကျမကိုပေးခဲ့ တာလေးပါ…………………….
ကျမအတွေးတွေက..ဟိုးးးးးးးးးးးးးးး အတိတ်ဆီ နှင့် ဆဲတတ်သော်လည်း ကားပေါ်မှ အမှန်တရားဘက်ရပ်တည်ပေးခဲ့ သော ဆေးမြှင်ကြောင်ရုပ်များနဲ့ လူငယ်လေးများဆီသို့ …….
လူတွေက စိတ်ရင်းကိုမြင်အောင်မကြည့်ပဲ ပုံဏ္ဍန်ကိုကြည့်ပြီး…အရင်ထင်ကြေးပေးတတ်ကြတယ်..
အ၀တ်အစား အသုံးအဆောင်ကောင်းတွေ ၀တ်ဆင် သုံးစွဲနေသူတိုင်း
လူလိမ်တို့၏လက်နှက်သည် အ၀တ်အစား ဆိုတဲ့စကားလေးကြားဖူးတယ်
ကိုယ်ကျင့် တရားတွေပျက်ကုန်ကျပြီဗျ အားလုံး အချောင်လိုက်ပြီ
အချောင်လိုချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ် ရှိသူတွေသာများလာပြီလေ
အဲဒါထက် တချို့ဆို လုပ်ရပ်ပါကြည့်လို့မရပြန်ဘူး
သက်သက်ယုတ်မာတဲ့လူတွေရှိသလို၊ ပုံမှန်အတိုင်းတော့ စိတ်ထားကောင်းသလိုနဲ့
ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် အတ္တကြီးပြီး ယုတ်မာတဲ့လူတွေလည်း ရှိပ့ါ :mad:
မသိတဲ့လူတွေကတော့ “ဟယ်၊ သူတော်ကောင်းကြီး၊ စိတ်ထားကောင်းလိုက်တာ” ပေ့ါ
တကယ်တမ်း ကိုယ်ကျိုးဖက်လာရင် ယုတ်ပက်ကြတာ နှစ်ယောက်မရှိဘူး
ကားပေါ်က ဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်ရတာ ဆရာမဂျူးရဲ့ ဟိုဝတ္တုထဲကလိုပါပဲ … ဘောလုံးပွဲကြည့်ပြီး အပြန် ဆဲဆိုလာတဲ့ လူအုပ်စု ကားပျက်တော့ ဆင်းတွန်းတဲ့ ၀တ္တုလေးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ … ။
တစ်နေ့တစ်နေ့ကားလိုက်စီးရင်း … ကားပေါ်က အတွေ့ကြုံတွေ ခဏခဏရတယ် … ။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ ဘယ်လိုမှန်းမသိပေမယ့် … ဒီနိုင်ငံမှာတော့ လေဒီဖက်စ်မဖြစ်နိုင်ဘူး … ဘာလို့လဲဆိုတော့ .. ကားကြပ်ကြပ်နေရာမှာ … ယောကျာ်းရော မိန်းမရော ပိကြပ်ညပ်နေတဲ့ အချိန် ဖင်တစ်နေရာစာ ထိုင်ရတာက တော်သေးတာမို့ … နေရာလွတ်ရင်တောင် အနီးနားက ယောကျာ်းတွေ ခပ်တည်တည်ဝင်ထိုင်နေကြပါပြီ … ။ တဖက်က တွေးမယ်ဆိုလျှင်တော့ .. ဦးရာလူစနစ်ပေါ့လေ … ကားကြပ်ကြပ်ကြီးထဲ သူတို့လည်း မတ်တပ်ဘယ်ရပ်ချင်ပါ့မလဲ … ။
အမြင်မတော်တဲ့လူတွေကို(ဗိုက်ကြီသည် ၊ရောဂါသည် ၊ ဒုက္ခိတ ၊သံဃာ၊ အိုမင်းမစွမ်းသူ) ထပေးတဲ့ တစ်ချို့ စာနာစိတ်ရှိတဲ့ လူတွေလည်း ရှိပါသေးတယ် …
http://myanmargazette.net/53764/creative-writing/short-story မှာ ရေးခဲ့ဖူးတယ် ။
ထူးအိမ်သင် က သူတန်ဘိုးထားတဲ့ အရာ နှစ်ခုကိုပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နဲ့ ဥာဏ်ပညာ ပါတဲ့။
ရွှေအိမ်စည့် ကိုကို က ရွှေအိမ်စည်ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်
ရွှေအိမ်စည် လိုချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုး သူ့မှာရှိလာဘို့
ထူးအိမ်သင် စံနဲ့ ပြောတာနော်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စံနဲ့ကျတော့ အင်း……။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ လူမှာအရေးကြီးဆုံး နှစ်ခုဟာ
*အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးမှု ဆိုတာကို အပြည့် အ၀ ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်။
အဲဒီ (၂)ခုသာမ၇ှိတော့ ၇င် လူတယောက်ရဲ့ ဘ၀တန်ဖိုးသုညဖြစ်သွားမှာ သေချာပါတယ်။
လူတွေရဲ့ စိတ်ရင်းကို အပေါ်ယံကြည့် ပြီး ဆုံးဖြတ်လို့ မ၇ဘဲ အေ၇းကြုံမှသာ သိခဲ့ ၇တာလဲ
ကိုယ်တွေ့ အခါခါပါဘဲ။ အခက်အခဲကြုံလာတဲ့ အခါ ထင်မထားတဲ့ လူတွေက လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအပြည့် နဲ့ ကူညီတာတွေ တွေ့ နေရတော့ လေးစားကြည်ညိုမိပြီး
ကိုယ်လဲ သူတို့ လို စိတ်မျိုးထားတတ်အောင်၊ ထားနိူင်အောင် ကြိုးစားနေရတုန်းပါဘဲ။
အမှန်တရားကိုချစ်မြ တ်နိုးပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ မဆိုင်သလို မနေဘဲ
့ရဲရဲဝင့်ဝင့်အမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်ပေးသွားနိူင်တဲ့ သတ္တိရှိဖို့ တော့ 
ရွှေအိမ်စည်ရေ…….ဒီလို အတွေးအခေါ်ကောင်းလေးတွေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
မရွှေပို့ စ်ကို ဖတ်အပြီးမှာ ဖီးလင် တော်တော်ဖြစ်ရတယ်ဗျာ
ဆဲတတ်သော်လည်း အမှန်တရားဘက်မှ ရပ်တည်တတ် ဆိုတာလေးကိုပေါ့
အဲဒါမျိုးတွေက နေရာတိုင်းမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး တွေ့ နေရဦးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ
ကျွန်တော် က တော့ ကျောက်သမား ဆိုတော့
ကျောက်စကား နဲ့ ပြောရရင်
ကျောက်ရဲ့ အခွံပေါ်မှာ ကာလာပြချက်တွေ နဲ့ သိန်းသန်းချီအောင် အောင်မယ့် လက္ခဏာ ပြနေတဲ့ ကျောက်ရိုင်းတုံးဟာ ၊ ခွဲဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ အထဲမှာ ဘာမှ ပါမလာတတ်သလို
အခွံပေါ်မှာ ဘာပြချက် မှ မရှိပဲ ခွဲလိုက်မှ အထဲကနေ သိန်းသန်းချီအောင် ထအောင်တဲ့ ကျောက် မျိုး လည်း မြင်ရပါများတော့
လူကိုအပေါ်ယံတင်မကြည့် ပဲနဲအတွင်းစိတ်ထိလည်း ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး
တစ်ခါတစ်လေတော စိတ်ကောင်းဝင်ပြီး ကူညီခြင်စိတ်ရှိပါတယ် တစ်ခါတစ်လေတော အကုန်းလုံးကိုမသိချင်းယောင်ဆောင်နေလိုက်တယ် ………
Lin Nay Yong says:
“လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို ငွေနဲ့မတိုင်းတာဘူး
လူတိုင်း တန်ဖိုးရှိပြီး အသုံးဝင်နိုင်ကြပါစေ။
ခုလို တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာသံပေသံလေးတွေ ဖတ်ခွင့်၊ကြားခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါနော်။